LOZA VOAJANAHARY :: Kaominina roa ravaravan’ny rambon-danitra tany Manakara • AoRaha
LOZA VOAJANAHARY Kaominina roa ravaravan’ny rambon-danitra tany Manakara
Potika tanteraka. Kaominina roa no rava noho ny fandalovan’ny rambon-danitra ny alahady lasa teo, tany amin’ny distrikan’ i Manakara, dia ny tao Nosiala sy Tataho. “Tsy nisy orana firy fa rivotra sy havandra no nandalo .Teo amin’ny 40 minitra teo ho eo ny faharetany”, araka ny fanazavan’ny Solombavambahoaka Andriantsizehena Benja Urbain, voafidy tany Manakara, omaly. Trano marobe no voalaza fa rava noho ny fandalovan’ ity rambon-danitra ity tany an-toerana. Ankoatra izay, potika ihany koa ny sekoly sy ny fiangonana.
Rava ny fambolena
Araka ny fanazavana, simba tanteraka ny fambolena any an-toerana. Manodidina ny 90% ny faharavana. Anisan’izany ny ao amin’ny kaominina Nosiala. “Potika avokoa ny ankamaroan’ny fambolena aty an-toerana. Saika nihitsan-dravina avokoa ireo fambolena vao maniry. Mihintsana ihany koa ny voa efa tokony hiakatra ho an’ny letisia satria efa manakaiky ny fotoam-piotazana aty an-toerana. Ankoatra izay, maina tanteraka ireo fambolena hafa toy ny vary sy ny lavanila”, araka ny fanazavan’ny ben’ny tanàna any an-toerana.
Ahiana, araka izany, ny fihenan’ny vokatra any amin’iny faritra iny, indrindra ny vokatra letisia. Anisan’ny faritra mamokatra anefa ny kaominina Nosiala raha ny fanazavan’ny ben’ny tanàna hatrany satria manodidina ny efapolo eo ho eo ireo fiarabe tonga manangom-bokatra any an-toerana isan-taona.
Araka ny fanazavana voaray avy an-toerana hatrany, anio no ho fantatra ny fitambaran’ireo zavatra simba. Amin’ity anio ity mantsy vao afaka manao ny tatitra ôfisialy any amin’ ny lehiben’ny Faritra ireo ben’ny tanàna any an-toerana. Aorian’izay vao hitondra ny fanampiana ireo tompon’andraiki-panjakana rehetra, araka ny fanazavana hatrany.
HERISETRA :: Mpiandry fonja voasambotra tamin’ny faharatrana ben’ny tanàna
BAOLINA KITRA – FIFIDIANANA :: Hofaritan’ny fihaonan’ny minisitera sy FMF ary ny CEN ny fotoana